PDF | လမ်းအိုလေး
Download PDF [642 KB]
(ဧပြီ၊ ၂၀၀၆ – ကျော်မွှေးစာပေ။)
Categories: Kabyarz, PDFs | Tags: မောင်ဒေး, ebook, Kabyarz, maung day, PDF, the-pleasure-sea | Permalink.
မြေချစ်သူ ကဗျာများ (မြေချစ်သူ)
Download PDF [474 KB]
Categories: Kabyarz, PDFs | Tags: မြေချစ်သူ, Kabyarz, myay chit thu, PDF | Permalink.
ရွှေနှလုံးသား ကဗျာစု (မင်းလူ၊ တိုးမိုး၊ မြင့်ကောင်း၊ မျိုးရာဇာညွန့်၊ မောင်မောင်စနေ၊ သားကြီးမောင်ဇေယျ)
Download [153 KB]
Source: Exit Poetry
Categories: Cover Arts, Kabyarz, PDFs | Tags: တိုးမိုး, မင်းလူ, မျိုးရာဇာညွန့်, သားကြီးမောင်ဇေယျ, မောင်မောင်စနေ, မြင့်ကောင်း, ebook, Kabyarz, PDF | Permalink.
စာပေါင်းသိုက် အက်ဆေးများ (ဇော်ဇော်အောင်)
စာပေါင်းသိုက် အက်ဆေးများ (ဇော်ဇော်အောင်) [600KB]
Categories: Essays, PDFs | Tags: စာပေါင်းသိုက်, ရသစာတမ်း, ဇော်ဇော်အောင်, Essays, PDF, zaw zaw aung | Permalink.
ဈေးထဲမှာ ကိုယ်ထည်ပြည့်ပြည့် အရသာရှိရှိ
ရေချိုငါးသလောက်ကြီးက ၁၈ကျပ်တဲ့ ။
ငဖျင်းက ၂၈ကျပ် ဈေးတဲ့ ။
ဒါနဲ့ ဆိုင်ရှင်ကို မေးကြည့်မိတယ် ။
ဘာဖြစ်လို့များ အရသာလည်းရှိ ကိုယ်ထည်လည်းပြည့်တဲ့
ရေချိုငါးသလောက်က ဈေးနည်းနေရတာလဲလို့ ။
ငါးဖျင်းကတော့ လူကြိုက်များလို့ ဈေးကြီးတယ်တဲ့ ။
လူကြိုက်နည်းတဲ့ကောင်။ လူကြိုက်နည်းတဲ့ကောင် (မောင်ချောနွယ်) PDF – (49.5 KB)
Source: Myanmar eBooks
Categories: Kabyarz, PDFs | Tags: လူကြိုက်နည်းတဲ့ကောင်, မောင်ချောနွယ်, Kabyarz, Mg Chaw Nwe, modernist poetry, PDF | Permalink.
သူသည် ကဗျာဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သည် (တာရာမင်းဝေ)
Categories: Kabyarz, PDFs | Tags: တာရာမင်းဝေ, ebook, Kabyarz, PDF, TYMW | Permalink.
Categories: Cover Arts, Kabyarz, L=A=N=G=U=A=G=E, PDFs | Tags: ဇေယျာလင်း, ၂၀၀၇, L=A=N=G=U=A=G=E, PDF, post modern, Zeyar Lynn | Permalink.